Amanqaku kaRishi Dave Martech Zone |
Amanqaku ngu URishi Dave
Intengiso esekwe kwiakhawunti (ABM) iyafumana umhlaba phakathi kweentengiso zeB2B. Ngokophando lwakutsha nje, i-2017 B2B yeNkqubo yokujonga izinto, i-73% yabathengisi be-B2B okwangoku basebenzisa okanye baceba ukwamkela i-ABM ngo-2017. I-ABM ayisiyongcamango intsha. Ngapha koko, abanye bathi iABM ibikade ikho ixesha elide njengothengiso. Isicwangciso esiphatha iakhawunti nganye njenge